Maitiro Ekuyera Wiricheya - Wiricheya Kukodzera
Chimwe chezvikonzero chikuru a remara munhu kana mukuru mugari kazhinji anoramba a wiricheya mhedzisiro yekusakwana kukodzera. Kana mumwe munhu akagara mu wiricheya yakamanikana, yakasimba, uye isinganetsi, zvakaoma chaizvo kuvaudza neimwe nzira pavanenge vachida kubuda.
Kugara mune isina kukodzera wiricheya zvinogona zvakare nyore nyore kukonzera zvisina basa kushungurudzika kana kuipa. Ichi chikonzero nei zvichinyanya kukosha kuve wakanyatso shongedzwa mu wiricheya usati watenga imwe.
Chigaro Kureba Kuyera
Kureba Kwemushandisi Approx. Chigaro Kureba
4'11 ″ uye pasi 14 ″ kusvika 16 ″
5'4 ″ uye pasi 17 ″ kusvika 18 ″
5'4 ″ uye pamusoro 19 ″ kusvika 21 ″
Kuwana Saizi Yakakodzera
Chinhu chakanyanya kukosha chekutevera kana uchitenga wiricheya iri kutsvaga saizi chaiyo. Rangarira kutsvaga wiricheya zviyero zvekugara zvakanaka. Mumwe nemumwe ane zviyero zvake saka ita shuwa yekutenga zvinoenderana. Chigaro upamhi, kukwirira kwechigaro, uye kudzika kwechigaro ndiwo mapoinzi akakosha anofanirwa kutariswa.
Zvakanyatso kuyera chikamu chimwe nechimwe che wiricheya inobvumidza marongero emahara ekugara zvigaro zvemushandisi mu wiricheya.
Chigaro upamhi Chiyero
Hupamhi hwehudyu munzvimbo yakagara + 1 inch
Kuyera Chigaro upamhi nokuti wiricheya Yakakodzera
Most popular wiricheya Chigaro upamhi iri 18 inches for a average munhu mukuru.
Kuti uwane chiyero chaicho che Chigaro upamhi, kuenzanisa kuyerwa kwechigaro Chigaro upamhi pamwe nekuyerwa kwechiuno chemunhu. Mushure meizvozvo, wedzera mashoma masendimita kubvumira kune inorema mbatya uye yemusoro.
Kugara kwechigaro kunoenderana nesarudzo dzekugadzirisa dzako chaidzo wiricheya inobvumira. Chokwadi mavhiripu zvinogadziriswa zvakanyanya uye zvinokubvumira nzira dzakawanda dzakasiyana dzekugadzirisa dzinosanganisira kukwirira kwegumbo riggings.
Mamiriro Akakodzera - Maitiro Ekuyera wiricheya Zvekukodzera
Kusarudza iyo chaiyo chigaro kudzika inobvumidza kukwira kwakasununguka kunyanya sezvo izvi zvichisimbisa kuiswa kwemabvi. Kugara kwechigaro kunodzivirira kumucheto kwechigaro kubva kupina mabvi emushandisi inova imwe yenyaya dzinowanzoitika wiricheyaVashandisi vanoita kunge vane. Kana chigaro chacho chakanyanyisa kuonda, huremu hwomushandi kuti udonhe pazvidya.
Mamiriro akafanira akakosha pakusarudza mwero wekunyaradza kwemunhu. Kukodzera kwakashata kunoreva kusamira zvakanaka uye kusamira zvakanaka zvinoreva kusagadzikana.